Chii chaunofanira kupfeka kana iwe uine bota? - Ndiri kubika
Chii chaunofanira kupfeka kana iwe uine bota?
Chii chekuvhara mamota?
Unofanira kuisa bandaid pamota here?
Unobvisa sei mamota nekukurumidza?
Unofanira kuvhara bota risati raputika here?
Mamota anokonzerwa nekusviba here?
Mushonga wemazino ungabatsira mamota here?
Anogona here Vicks kuunza bota kumusoro?
Mamota anogona kupora pasina kuputika here?
Musimboti wemota unobuda wega here?
Ko Vicks VapoRub yakanaka kune mamota?
Sei vanhu vachiwana mamota?
Chizoro chipi chakanakira mamota?
Ungaisa Vaseline pamamota here?
Bota rinofanira kugara kwenguva yakareba sei?
Ko kana ndikabuda bota?
Shandisa sterile gauze dressing pamota. Kana chimota chatanga kupera, chichengetedze chakaoma uye chakachena. Ivhara zvakasununguka kubikira nemucheka usina utachiona. Shandisa tepi yerubatsiro rwekutanga kuti urambe uripo.
Isa jira rinodziya, rakanyorova pamota pamota kakawanda pazuva. Wedzera imwe dzvinyiriro paunenge wakabata jira rekugezesa panzvimbo pasina kupinza pamota. Kana bhodhoro richingoputika zvakasununguka, chengetedza rakafukidzwa nemucheka mutsva, wakachena kana gauze. Izvi zvichaita kuti utachiona husapararire kune dzimwe nzvimbo.
Isa bhandi pairi kuitira kuti mvura irege kupararira. Chinja bhandeji mazuva ese. Kana iro bota riri kuerera roga, rega rinyorove. Ramba uchizvichenesa kaviri pazuva nesipo nemvura.
Kurapa Kwemota - Mishonga Yekumba
Isa zvinodziya zvinomanikidza uye sunga iyo yemota mune inodziya mvura. Izvi zvinoderedza marwadzo uye zvinobatsira kukwevera pus kumusoro. …
Kana rota ratanga kubuda, geza nesipo inorwisa mabhakitiriya kusvikira bhuti rese raenda uye rachena nekukwesha doro. …
Usapike bota netsono.
ZVINONAKIDZA: Inguva yakareba sei yemota mirefu mikuru?
Kana rangova vhurika, rivhare kudzivirira hutachiona muronda rakashama. Shandisa gauze kana padhi inonwisa kudzivirira kuti urwa husapararire. Shandura gauze kana pedhi kakawanda.
Mamota anowanzoitika akabatana nehutsanana husina kutsarukana, nharaunda dzine tsvina, kusangana nevanhu vane mamwe marudzi ehutachiona hweganda uye kutenderera kweropa kwakashata. Iyo inogona zvakare kuve chiratidzo cheisina kusimba immune immune, semuenzaniso nekuda kwechirwere cheshuga, kushandiswa kwenguva yakareba kwesteroid, gomarara, kusagadzikana kweropa, kudhakwa, AIDS, uye zvimwe zvirwere.
Nekudaro, mishonga yekumba yakadai sekuisa huchi, calcium, mushonga wemazino, curd, nezvimwe zvinogona kubatsira zvakanyanya kune avo vane mamota ane zvechinguvana uye asina kuzara kwenguva refu. Zvakakosha, zvakadaro, kubvunza chiremba kana chiri chiitiko chinowanzoitika uye chinorwadza nguva imwe neimwe.
Yakachena, yakaoma chironda chakaputirwa neVick uye chakafukidzwa nebhandi-rubatsiro, iine kana isina kushandisa pombi yekupisa, inogona kuunza bundu rinorwadza kumusoro.
Boora rinogona kupora roga. Zvisinei, zvinogona kuwedzera kurwadza sezvo urwa hunoramba huchiwedzera muronda. Panzvimbo pekumuka kana kunhonga pamota, izvo zvinogona kutungamira kuhutachiona, bata bota nehungwaru.
Nekufamba kwenguva, bota rinokura muunganidzwa wepus mukati maro. Izvi zvinozivikanwa sepfungwa yemota. Usaedze kubvisa musimboti kumba sezvo kuita kudaro kunogona kukonzera hutachiona kuwedzera kana kupararira kune dzimwe nzvimbo. Mamota anogona kuenda ega pasina kurapwa.
ZVINONAKIDZA: Unofanira kubika spaghetti kwenguva yakareba sei?
Zviviri zvezvishandiso zvaro zvinoshanda - menthol uye camphor - zvinyoro analgesics (zvinoderedza marwadzo) uye zvinoshandiswa mukurwisa-itch lotions. VapoRub inobatsirawo kuputika kwemabhuru nekudonha, izvo zvinopa mamwe marwadzo ekurwadziwa.
Mazhinji mamota anokonzerwa neStaphylococcus aureus, rudzi rwehutachiona hunowanzowanikwa paganda uye mukati memhino. Bump fomu sezvo pus inounganidza pasi peganda. Mamota dzimwe nguva anokura panzvimbo dzinopwanywa ganda nekukuvara kudiki kana nekurumwa nezvipembenene, izvo zvinopa hutachiona kupinda nyore.
Over-the-counter mishonga inorwisa mabhakitiriya
Sezvo vanhu vazhinji vachichengeta chubhu yeNeosporin mumushonga wavo kabhineti, ungangodaro usatombofanira kutarisa kure kuti uwane. Inogona zvakare kubatsira kuchengetedza hutachiona kubva pakupararira. Isa mushonga unorwisa mabhakitiriya kune wemota kanokwana kaviri pazuva kusvikira mamota aenda.
Isa petroleum jelly mafuta kuti uchengetedze kubva mukukwesana. Isa mushonga unorwisa mabhakitiriya kana bota raputika kudzivirira hutachiona. Tora pamusoro pemishonga yekurapa yekurapa kuti ushandise kusagadzikana kana zvichidikanwa.
Mamota anogona kutora kubva pa1 kusvika kumavhiki matatu kuti apore. Muzviitiko zvakawanda, bota haripore kusvikira ravhurwa uye richidonha. Izvi zvinogona kutora kusvika pavhiki. Carbuncle inowanzoda kurapwa nemupi wako wezvehutano.
Kuputika kwemota kunogona kuunza bhakitiriya kune dzakadzika zvidimbu zveganda kana muropa. Izvi zvinogona kukonzera hutachiona hwakanyanya. Chiremba anogona kubvisa pamota zvakachengeteka uye onyora mafuta ekuzora anouraya utachiona kana kuti mishonga inorwisa mabhakitiriya kana zvichidiwa.
ZVINONAKIDZA: Chii chinokonzera kufashaira mumagaro?
Inotora nguva yakareba sei pizi nyowani kutora?
Pizi itsva dzinotora nguva yakareba here kubika? Danho rechipiri: Bika pizi kwenguva refu kupfuura
Mubvunzo: Sei kufashaira kuchida simba rakawanda pane kunyungudika?
Kuchinja kwechikamu kubva kumvura kuenda kune gasi kunoda simba rakawanda nekuti mabhondi anofanira
Unogona here kushandisa zvekare crab bika?
Unogona kudya gakanje rakasara rakafashaira here? Iwe unogona kudziya zvakare zvakachengeteka zvekudya zvegungwa kusvika
Mubvunzo unowanzo: Matombo anogona kuputika here kana akabikwa?
Hazvina ngozi here kubika matombo? USAFIRIRA DOMBO! Zvisinei kuti chii
Mubvunzo unowanzo: Hamu yakabikwa ine utano here?
Hamu yakapfuma muprotein, minerals, uye zvimwe zvinovaka muviri zvinotsigira hutano hwakakwana. The
Mubvunzo unowanzo: Unogona here kuisa doro rekukwesha pamota?
Kana boira richinge ratanga kupera, rigeze nesipo inorwisa mabhakitiriya kusvika yapera
Ndinogona here kushandisa mukaka wakabuda semukaka panzvimbo yemukaka mukubheka?
Unochengeta sei mupunga wakabikwa kwesvondo?
Ndeipi simbi isina tsvina yakachengeteka pakubika?
Zvinotora nguva yakareba sei kuita fry huku makumbo pamadhigirii mazana matatu nemakumi matatu nenomwe?
Inguva yakareba sei iwe uchibika shrimp yechando?